Umshini Wokugcwalisa Ukudla Nesoso - Micvd.com
NPACK lwakha uhla oluphelele lwezinhlelo zokugcwalisa izindlu zangasese ukufeza izidingo zalabo abasebenza ngokudla nososo. Imishini yethu yokugcwalisa iyatholakala kuyo yonke imidwebo yokuhlanzeka enamasondo wokukhipha okusheshayo, ukufakwa kokuqina, kanye neshubhu yangasese. Amaphampu okuhlanzeka ayatholakala kuzinhlelo zokusebenza ezisebenzisa imikhiqizo ye-viscous. Izindawo zokugcina izinto ezisetshenziswa emishini yethu yokuhlanzeka zifaka ukufakelwa okusheshayo kokuxhunywa okusheshayo ukuze imishini yokufaka amabhodlela ihlanze kalula futhi ihlanzwe ngokuphelele. Izinhlelo ezingcwengekile zingafakwa ukusiza i-opharetha ekuhlanzeni i-inline filler. Konke NPACK imishini yokugcwalisa yenzelwe ukusetha okulula, ukushintsha okulula, isikhathi sokuphumula esincane sokugcinwa nokuhlanzwa, nokusebenza okuhlukahlukene kakhulu.
Siyakuqonda ukubaluleka kokugxila kwezokuthuthwa kwendle, nokuqina uma sisebenza ngokudla nososo. Vumela amaqembu ethu wokuthengisa onolwazi kanye nobunjiniyela asebenze nawe ukuthuthukisa ikhambi elizolingana nezidingo zakho zemishini yokudla kanye nezidingo zomshini wokugcoba we-sauce.
Izici Zomshini We-Sanitary Food And Sauce Packaging & Izinzuzo
Ukwakhiwa kwe-aluminium yensimbi engenasici nokuvikeleka kwemishini kuvikela le mishini impilo ende.
NPACKUkudla kanye nomshini wokufaka isoso kusetshenziswa ukwakhiwa okusheshayo kokubhidliza konke kufaka phakathi ukufakelwa okwenziwe nge-flanged, ukuxhumeka kwe-tri-clamp, kanye nama-valve okususa amakhefu okusheshayo kanye nokwanda kwamaphampu wokukhulisa ukusebenza kahle kokuhlanza izindawo zokuhlanza.
Ukuguquguquka nokusebenza okulula kuyizici ezibalulekile zomklamo ngamunye we-inline filler ukuze imikhiqizo eminingi neziqukathi ziqhutshwe ohlelweni olulodwa olunezingxenye ezimbalwa noma ezingekho nhlobo zokushintsha.
NPACKUmshini wokufaka isobho wokufaka inline kulula ukuwusebenzisa nokusetha. Izikhathi zokugcwalisa zingagcinwa njenge "zokupheka" zokusetha okusheshayo ukunciphisa isikhathi sokuphumula futhi wandise ukukhiqiza komugqa wokufaka.
Izicelo Zokugcwalisa Yezinhlelo Zokuhlanzeka
Ukudla okuncane nokunwebekayo okungamanzi kanye nososo
Ukudla okungamaphakathi okuphakathi nendawo ephezulu yokudla nosiphu
Imikhiqizo yokudla enamanzi
Umshini Wokugcwalisa I-Sauce
Umshini wokugcwalisa i-NP-VF othomathikhi wokugcwalisa isoso uklanyelwe ngokukhethekile ukugcwalisa isoso se-viscous esitsheni sengilazi kanye namabhodlela ezilwane, futhi okuwukuthi yi-sauce filler, umshini wokupakisha we-sauce jar.
Izinhlobo ezahlukene NPACK umshini wokugcwalisa usoso othomathikhi
Kunamamodeli nezinhlobo eziningi zesisekelo somshini wokugcwalisa i-usoso kumthamo ohlukile, inombolo yokugcwalisa yama-nozzles isuka ekhanda linye iye emakhanda ayi-16, futhi umthamo wokugcwalisa usuka ku-5g kuya ku-20g, no-100g kuya ku-1000g ngisho no-1000g kuya ku-5KG.
I-20L kuye ku-200L I-hopper ephezulu ongayikhetha, kabili iJacket hopper enesifudumezi nohlelo lokuxuba inketho,
Umzimba oyinhloko womshini owenziwe i-304SS
Ukugcwalisa ama-nozzles, ukugcwalisa ama-nozzles kuklanyelwe ngokukhethekile ukuvaliwe
Ukugcwalisa ama-nozzles aqhubekela phezulu naphansi ngesilinda somoya, ne-motorvovo ye-servo ehamba phezulu naphansi ngenketho
Uhlelo lokulawula lwe-PLC, nokusebenza kwe-HMI
Kwenziwe ngokukhethekile ihhashi ne-valve yesoso, enohlelo lwe-CIP lokuxhuma ihhashi.
Amazabuza agcwalisayo Imibhobho engu-1-16
Amandla okukhiqiza 800 -5000Amabhodlela Ngehora ngalinye
I-Volume Yokugcwalisa I-100-500ml, 100ml tp 1000ml
Ukunemba ± 0.1%
Kuqhutshwa I-Panasonic Servo Motor
Okungaphakathi Isikrini sokuthinta se-Schneider
Ukulawulwa kwe-PLC, ukusebenza kusikrini sokuthinta.
I-Panasonic servo motor eqhutshwa, shintsha ngokuzenzakalela usayizi wokugcwalisa ku-HMI, isib. Abasebenzisi bafuna ukugcwalisa i-500g isoso, abasebenzisi bafaka nje inombolo engu-500, khona-ke umshini uzolungisa ngokuzenzakalela
I-volumetric yi-piston, ukunemba okuphezulu kokugcwalisa
Ngokushisa okuphezulu kweJacket yejacket kanye nokuxuba amathangi okuzovikela ukukhala kwe-sauce ngemuva kokuyeka ukusebenza ngosuku olulodwa noma ngaphezulu kwezinsuku
Umshini wokugcwalisa nge-sauce othomathikhi nawo ungaba nomsebenzi ngohlelo lwe-CIP oluzoxhuma abasebenzisi be-CIP system
Ihhashi le-sauce filler lenziwe ngokukhethekile ngokuya ngesimo se-sauce, akukho kona efile, ibanga lokudla
Amashubhu athambile noma amapayipi okufafaza nge-sauce kufakwa ku-world brand Toyox kusuka ku-japan
Kwenziwe ngokukhethekile i-rotary valve yokudlulisela uju lwe-viscous
I-NP-VF-1 Umshini wokugcwalisa uketshezi loju oluzenzakalelayo
Ukwakhiwa komzimba womshini: Umshini wokugcwalisa wonke okhiqizwe yi-SUS304, izinto ezithintiwe yilezi ze-SS 316L, Kala ngezinga le-GMP
Khetha uhlelo lokulawula lwe-PLC, iphaneli yokuthinta isikrini sokuthinta ingagcina amaqembu amaningi wedatha;
Vumela ukugcwaliswa kokuphakamisa, uqiniseke ukuthi akukho-bubble;
Ukugcwalisa ama-nozzles ngomsebenzi wokulwa nokuvuza;
Kulula ukusebenza, alikho ibhodlela aligcwalisi, ukutholwa kokuzenzakalela;
Ingakwazi ukuhlomisa ngomugqa wokukhiqiza othelekayo: Ukuhlunga kwamabhodlela, ukugcwalisa, ukuhambisa cap, ukufaka i-ciling, ukubeka uphawu, ukulebula, ukuphrinta, ukupakisha nokunye.
I-PLC elawulwa yi: SIMens (evela eJalimane) noma i-MITSUBISHI (evela eJapan);
Umshini Wokugcwalisa Ibhodlela Ngokuzenzekelayo
Njengoba ujamu / isoso kuyinto esetshenziswayo ekhethekile, ithangi lesitoreji liklanyelwe ngokukhethekile i-jacked futhi lihlale lifudumele, eliqinisekisa izinga lokushisa lokugcwala lika-jam / i-sauce njalo, imishini isebenza ngesimo esitezi futhi ukunemba kokugcwalisa kunembile.
Umshini wokugcwalisa umshini wokugcwalisa i-automatic jam wawuklanywa futhi wakhiqizwa yiShanghai Npack Automation Equipment co., Ltd, especial ye-liquid kusuka ku-viscous emincane kuya ku-high density liquid, njengamanzi, uwoyela, ilayisi, ukhilimu, uJam, isoso, uju, i-ketchup nokunye. kuvuliwe. Kusetshenziswa kakhulu embonini yamakhemikhali, ekudleni kokudla nakwezemithi.
Lo mshini wokugcwalisa i-piston oqondile uthambile owakhiwe yinkampani yethu. I-Adopts PLC nesikrini sokuthinta sokulawula ukubukeka komshini wobuntu bomshini, okunembile kokulinganisa, ukwakheka okuthuthukile, ukugijima okuthembekile, nekhanda ngalinye lokugcwalisa kungalungiswa ngawodwana. Zonke izingxenye ezixhumana nezinto zokugcwalisa zenziwe ngensimbi ephezulu engenasici304, ukubukeka okuhle komshini, nazo zihlangabezana ne-GMP standard.
Umshini usebenzisa i-piston pump rotary valve sakhiwo sokugcwalisa, esifanele zonke izinhlobo zesoso esinamathelayo, ukunemba okuphezulu; Isakhiwo sepompo sisebenzisa isinqamuleli esihlakazisa isitho, esikahle ukugeza, inzalo.
Indandatho ye-piston yepampu yomjovo we-volumetric isebenzisa izinto ezihlukile ze-silicone, i-polyflon noma ezinye izinhlobo ngokusho kwesici se-sauce.
Uhlelo lokulawula lwe-PLC, ijubane lokulungisa ukuguqulwa kwesivinini, phezulu ngokuzenzakalelayo.
Umshini uzoyeka ukugcwalisa ngaphandle kwebhodlela, ubale inani lamabhodlela ngokuzenzakalelayo.
Ukugcwalisa inani lawo wonke amaphampu kulungiswa kusixha, ipompo ngalinye lingashintshwa. Sebenza lula futhi ngokushesha.
Ukugcwalisa ikhanda kwamukela iphampu ye-piston ejikelezayo ngomsebenzi we-anti-Draw and anti-dropping.
Umshini wonke ungamabhodlela afanele ngosayizi ohlukile, ukulungiswa kalula, futhi ungaqedwa ngesikhathi esifushane.
Umshini wonke uhlangabezana nemfuneko ye-GMP
Ama-bluetooth we-2-12, noma abekwe ngokwezifiso
Ibanga lebhodlela elisetshenzisiwe:
Ukubekezelela ukugcwaliswa kwenani (ukunemba):
Amabhodlela angama-800-4200 / ihora lama-30b / iminithi ngamabhomu wokugcwalisa ama-4L
1.2-1.4m³ / iminithi
isikrini sokuthinta, isilawuli se-PLC
Ukugcwalisa amabhuzu kusuka kumabhulophu we-2 -16 wokukhetha
Ama-anti-drops, afakwe ukuvala izibhamu zokugcwalisa
Lapho ugcwalisa, izibhamu zokugcwalisa zizofaka ezansi zamabhodlela
Ukugcwalisa ivolumu kungashintshwa ngokuzenzakalela nge-touch screen, Okwamanje ikhasimende nalo lingakhetha ukuguqulwa ngokuphathwa kwejubane lokutshala umnotho.
Ukulawula isivinini sejubane, futhi akukho bhodlela ayikho ukugcwaliswa
Uhlelo lokusebenza oluphezulu lwe-hopper, nesixwayiso ngokuzenzakalela ngokuntuleka koketshezi, futhi okuzenzakalelayo